Charchit Online Khabar » भावुक भएर रुँदा ताैल घट्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी
भावुक भएर रुँदा ताैल घट्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी
प्रकाशित मिति : २२ असार २०७६, आईतवार १७:५३
काठमाडाैँ। मानिसले जीवनभरमा कति आँसु झार्छ होला ? अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्, एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने गर्छ । तर कहिलेकाँही मानिसहरु आफ्नो भावनालाई दबाउन खोज्छन्, आफ्नो पीडाहरु बाँड्न पनि चाहदैनन् । कसैलाई सम्झेर रुनुले तपाईको अनावश्यक तौल घट्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ? तर पछिल्लो अध्ययनको तथ्य यही हो । यदि त्यसो भए अब अहिलेसम्म दबिएको आँसुको ग्यालेन भर्न तयार रहने कि ?